Sidee Canugaada aad Ugu Dhigi Kartaa Muqrtaric Mid Wax soo Hindisa#Qaab fudud | Xaqiiqonews
Sidee Canugaada aad Ugu Dhigi Kartaa Muqrtaric Mid Wax soo Hindisa#Qaab fudud
Hambalyo ! horayba canugaada waxa uu ahaa muqtaric caqli badan maxaa yeelay bani-aadamka waxaa uu ka caqli badan yahay uunka kale ee dunida kula nool.
laakin xasuusnow aadanaha ayaa ku kala duwan fikirka hal abuurnimada iyo wax soo hindisada,- sababtoo ah qaar anaga naga mid ah ayaa ku wanaagsan in ay ku fikiraan waxa sanduuqa binaanka ka ah.
Nasiib wanaag caruurta oo dhan waa hal-abuurayaal….sidaasi waxaa aaminsan sayniska… halkan waxaan idinku soo gudbineynaa qaar ka mid ah Wadooyin hadii aad raacdo canagaado ka dhigeyso mid caaqil ah oo dunida waxa ku soo kodhiya,
-Xaywaanaadka,Baabuurta iyo Shimbiraha
waxaa nagu hareereysan xaywaanaad fara badan sida mukalaasha, eeyaha, ariga, dameeraha iyo kuwa kale oo badan hadaba weydii muqtarica yar su,aalo badan sida , eeyaha maxey cunaan? guriga eyga waa nooce? xaywaankan dadka ma cunaa? mise? iwm.
dhanka kale u ogolow in uu ka fikiro shimbiraha, ku waal Su,aalo badan sida, Qaabkee shimbiraha u biibaan? adiga ma biibi kartaa? maxaa shimbiraha u gaar ah?
wax ka Weydii muqtarican yar baabuurta, sidee u shaqeeyaan? ma jeceshahay in aad raacdo? waa hubaal su,aalaha noocan ah ee soo laalaaba canuga waxa ay ku keenayaan fikir dheeraad ah in uu u yeesho dunida.
-U sheeg canugaada in qaladka uu yahay wax wanaagsan
Canugaada aad ayey u caawin kartaa hadii aad badiso oo aad mar walbo u sheegto oraahda soomalida ee dhaheyso”Qof aan wax haleynin wax ma sameeyo” .
soomaalida oo kaliya ma ahan wax sidaasi aaminsan , waa kan nin ganacsade shiineys ah oo markii la weydiiyey “waa maxay sirta guushaada ?” waxa uu ku jawaabay sirta guusheyda waa labo eray oo ah “go,aano wanaagsan” waxaa la weydiiyey “sidee ku gaartay go,aano wanaasgsan? waxa uu yiri hal eray oo ah “khibrad” waxaa lagu yiri “sidee ku heshay khibrad? waxa uu yiri shiineyskii waxan aan khibrad ka helay labo eray oo ah “go,aano xun”
Cilmi baarayaal ayaa waxa ay leeyihiin ,Caruurta ka cabsata qaladaadka waxa ay kja hal-abuur yaryihiin caruurta kale.
-Weydii canuga su,aalaha furan
u badi canuga weydiinta su,aalaha ku bilaabanaya “maxaa dhacaya hadii? tusaale weydii “maxaa dhacaya hadii dadka biibaan? maxaa dhacaya hadii diyaaaradaha dhulka socdaan? ka raadi canuga in uu xaliyo howlaha qaarkooda tusaale weydii “sidee loo nadiifin karaa qolka si dhaqso ah? sidee loo waraabiyaa geedaha anaga oo aan isticmaalin tubada biyaha.
-Canugaada ka dhig xor
Caruurta loo meeriyo wixii ay qaban lahaayeen waxa ay ka hal-abuur yaryihiin caruurta xoriyadda loo siiyo in ay doortaan wixii ay jecelyihiin.